किन गर्छन् मानिस आत्महत्या ? आत्महत्या गर्ने मानिसका लक्षणसहित - Internet Khabar
किन गर्छन् मानिस आत्महत्या ? आत्महत्या गर्ने मानिसका लक्षणसहित
February 25, 2017 August 1, 2018 Internet Khabar
मानिसको मन सधैभर एउटै हुदैन । कहिले खुसी त कहिले हतास हुन्छ । तर निरन्तर रुपमा मन दुःखी हुन्छ भने त्यो राम्रो संकेत होइन । कहिले काँही हाम्रै आफ्न्तले देखाएको आत्महत्या सम्बन्धि स्वभावको हामीले हेक्का राख्दैनौं । तर पछि उनीहरुले छोडेको आत्महत्यासम्बन्धि नोटदेखेपछि पश्चताप मान्छौ । विज्ञहरुका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आत्महत्या गर्न विभिन्न कारण हुन्छन्ः
कष्टरउत्पिडनः कार्य क्षेत्र वा घर वा अन्य कुनै स्थानमा उत्पिडत बा कष्ट भोग्न बाध्य मानिस पनि आत्महत्याको बाटो रोज्ने खतरा भएको विज्ञहरु बताउछन् । दाइजो, यौनहिंसा वा आफ्नो कामसँग सम्बन्धित अन्य उत्पिडन भोगका मानिसहरुमा आत्महत्याको सोच आउछ ।
मौसम परिबर्तन हुदैछ-विभिन्न रोगको सक्रमणबाट बच्न यी उपाए अपनाउनुस
श्वासप्रश्वास लिन गाह्रो : कस्तो समस्या हो ?
बाजुरा अस्पतालमा पहिलो पटक आन्द्राको शल्यक्रिया सफल
September 17, 2016 July 31, 2018
February 26, 2017 December 27, 2018
अनुहारको कुन भागमा चाउरी पर्दा कुन रोगको खतरा ?
आँखा शिविरमा सयौँको उपचार